Iindaba - Ibhotile yokubonisa ubushushu
Ukusombulula ingxaki yokusela amanzi ebusika, ukhetho lokuqala ekwindla nasebusika-ibhotile ye-thermos
Ukuphela kukaSeptemba, imozulu yajika yabanda ngoko nangoko, kwaye kwakuza kubakho ukubanda kwengqele rhoqo kusasa nangokuhlwa. Ngapha koko, ukongeza kunxibe ngakumbi, ukunaka ubushushu kunokusombulula ingxaki enkulu. Ngeli xesha lonyaka, sinokukhetha amanzi ashushu ashushu endaweni yamanzi abandayo abandayo, ngakumbi ekwindla xa kushushu kwaye kuyabanda. Kwaye kukho iibhotile ezingenakubalwa ezivenkileni. Kunokuthiwa zonke iintlobo. Ngaba ikhona ibhotile ye-thermos edibanisa ubushushu bexesha elide kunye nokuphatheka okuzinzileyo?
Le flask yentsimbi engenasici ihlangabezana nazo zonke iimfuno zam zeeflask. Ngokomdibaniso wombala, mininzi imibala ongakhetha kuyo kwaye inokwenziwa ngokwezifiso. Isikimu sombala esicocekileyo sinokunyusa ukwamkelwa kunye nokuphepha iimpazamo. Kwangelo xesha, itekhnoloji ye-pearlescent kumphezulu iphucula kakhulu umgangatho webhotile, nokuba ayisetyenziswanga, iya kujongeka intle etafileni.
Ubungakanani bulungile kanye, ngobude be-235mm kunye nobubanzi be-65mm, akukho ngxaki ngokuyithwala yonke imihla. Ubunzima bulawulwa malunga ne-180g, engafaniyo kakhulu nobunzima beefowuni eziphathwayo esihlala sizisebenzisa. Ngomthamo wokukhetha we-300 ~ 500ml, akusekho, akukho ngaphantsi, ikofu enye-yokupheka ikofu inokuhlangabezana ngokupheleleyo nokusela kwabantu abaninzi.
Ngapha koko, umgaqo webhotile ye-thermos ulingana ngokulinganayo, yonke loo nto iphucula isiphumo sokugquma ngokwandisa ukungabinamoya. Ewe, le bhotile ye-thermos ayikho ngaphandle, kodwa kunokuthiwa yeyona nto iphambili kwi-insulation. Le bhotile ye-thermos ikwanomsebenzi omtsha wokubuyisela ibhetri, onokuthi ujonge kwaye ulawule ubushushu bebhotile ngalo naliphi na ixesha naphina, kwaye ufezekise okokugqibela kusambathiso.